नेपाली बजारमा यस साता सुनको मूल्य यात्रा ओरालो, तोलाको कति ? – ramechhapkhabar.com
नेपाली बजारमा यस साता सुनको मूल्य यात्रा ओरालो, तोलाको कति ?
काठमाडौं, १४ चैत्र ।
काठमाडौं -नेपाली बजारमा यस साता सुनको मूल्य यात्रा ओरालो लागेको छ । अघिल्लो साताको शुक्रबार तोलाको ८६ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य यस साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेको हो ।
शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य ८६ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, अघिल्लो साताको शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा ८६ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यस साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेको छ । शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको ८५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
मेलम्चीको पानी आइतबारदेखि वितरण गरिने
काठमाडौँ– मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा पानी वितणको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले मेलम्चीको पानी आइतबारदेखि वितरण गर्ने भएको छ। खानेपानी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले पुरानै संरचनाबाट मेलम्चीको पानी वितरण गरिने जानकारी दिए।
शुक्रबारदेखि सुन्दरीजलबाट खानेपानी छोडिएको थियो।परीक्षण सफल भएपछि आयोजनाले धारा–धारामा पानी पठाउन लागेको हो। उनका अनुसार आइतबार १० बजे पानी ट्यांकीमा आइपुग्नेछ।
उनले भने, ‘महांकाल चौर, मीनभवन, अनामनगर बाँसवारी, बालाजु र महाराजगन्जस्थित पानीपोखरीमा रहेका रिजभ ट्यांकीमा पानी जान्छ त्यसपछि हाम्रो प्लानिङअनुसार आइतबार १० बजेसम्म ट्यांकीमा पानी आइपुग्छ अनि वितरण सुरु गछौँ।’
उनले पानी वितरणका लागि खुमलटारको नयाँ ट्यांकीको पनि प्रयोग गरिने बताए। पहिलो चरणमा चक्रपथभित्र र आसपासका झण्डै दुई लाख धाराका उपभोक्ताले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पुरानै पाइपलाइनका १ लाख ८० हजार धारामा पानी पठाइनेछ। उनले दुई चरणमा गरी १७ करोड लिटर पानी वितरण गरिने पनि बताए।